कोरोनाभाइरसको खतरनाक डेल्टा प्लस भेरिअन्ट कसरी बनेको थियो ? | Seto Khabar
काठमाडाैँ । भारतलगायत केहि देशहरूमा काेराेनाभाइरसकाे डेल्टा प्लस भेरिअन्ट देखिएकाे छ । यसले नेपालमा पनि थप चिन्ता थपिदिएकाे छ । फेरि याे संस्करण खतरनाक रहेकाे चिकित्सकहरूले बताउँदै छन् जसले गर्दापनि हेलचेक्राइँ गर्नैनहुने भएकाे छ ।
मस्सिना अस्पताल, मुम्बईकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. तृप्ति गिलाडाका अनुसार, अन्य भाइरस जस्तै कोरोना पनि यसको नक्कल गर्दछ, अर्थात् यसको संख्या बढाउँदछ । यस परिवर्तनको क्रममा भाइरसमा देखा पर्दछ । यो भाइरसको एक प्रकारको परिवर्तन हो । यस तरीकाले भाइरसमा हजारौं परिवर्तनहरू आउँछन्, तर त्यहाँ केहि परिवर्तनहरू छन् जुन यसलाई अधिक खतरनाक र संक्रामक बनाउँदछ ।
विज्ञहरू भन्छन कि डेल्टा भेरिअन्टका कारण दोस्रो लहरमा कोरोनाको पहिलो लहरभन्दा बढी मृत्यु भएको छ । केही वैज्ञानिकहरू नयाँ डेल्टा प्लसबाट आउने तेस्रो छालको जोखिमको पनि भविष्यवाणी गरिरहेका छन् ।
कोराेनाको डेल्टा प्लस भेरिअन्ट भारत, अमेरिका र बेलायतमा फेला परेको छ ।
कुन प्रकारका खोपहरू यस प्रकारमा प्रभावकारी हुन्छन् भन्नेबारे मानिसहरू शंकामा छन् । तर अमेरिकी स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्थानका वैज्ञानिकहरूले भने- अहिलेकाे खोप कोरोना, डेल्टा र डेल्टा प्लस दुबै रूपहरूमा प्रभावकारी छ ।
केही वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन्, यसले संक्रमणलाई द्रुत रूपमा फैलाउन सक्छ, तर अहिलेसम्म यसको कुनै प्रमाण भेटिएकाे भने छैन । पछिल्ला दुई महिनादेखि डेल्टा प्लसको उपस्थिति भारतका धेरै राज्यहरूमा देखिएको छ, तर घटनाहरूको संख्यामा यहाँ उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छैन ।